CraveCoin စျေး - အွန်လိုင်း CRAVE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CraveCoin (CRAVE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CraveCoin (CRAVE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CraveCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $131 210.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CraveCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CraveCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CraveCoinCRAVE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.321CraveCoinCRAVE သို့ ယူရိုEUR€0.271CraveCoinCRAVE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.244CraveCoinCRAVE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.292CraveCoinCRAVE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.88CraveCoinCRAVE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.02CraveCoinCRAVE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč7.11CraveCoinCRAVE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.19CraveCoinCRAVE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.426CraveCoinCRAVE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.444CraveCoinCRAVE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$7.17CraveCoinCRAVE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.49CraveCoinCRAVE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.72CraveCoinCRAVE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹24.04CraveCoinCRAVE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.54.13CraveCoinCRAVE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.439CraveCoinCRAVE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.482CraveCoinCRAVE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿9.99CraveCoinCRAVE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.23CraveCoinCRAVE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥33.86CraveCoinCRAVE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩380.43CraveCoinCRAVE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦122.11CraveCoinCRAVE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽23.55CraveCoinCRAVE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴8.89
CraveCoinCRAVE သို့ BitcoinBTC0.00003 CraveCoinCRAVE သို့ EthereumETH0.000806 CraveCoinCRAVE သို့ LitecoinLTC0.00533 CraveCoinCRAVE သို့ DigitalCashDASH0.00307 CraveCoinCRAVE သို့ MoneroXMR0.0034 CraveCoinCRAVE သို့ NxtNXT22.98 CraveCoinCRAVE သို့ Ethereum ClassicETC0.0445 CraveCoinCRAVE သို့ DogecoinDOGE87.47 CraveCoinCRAVE သို့ ZCashZEC0.00317 CraveCoinCRAVE သို့ BitsharesBTS12.22 CraveCoinCRAVE သို့ DigiByteDGB11.79 CraveCoinCRAVE သို့ RippleXRP1.04 CraveCoinCRAVE သို့ BitcoinDarkBTCD0.0108 CraveCoinCRAVE သို့ PeerCoinPPC1.12 CraveCoinCRAVE သို့ CraigsCoinCRAIG142.74 CraveCoinCRAVE သို့ BitstakeXBS13.36 CraveCoinCRAVE သို့ PayCoinXPY5.47 CraveCoinCRAVE သို့ ProsperCoinPRC39.31 CraveCoinCRAVE သို့ YbCoinYBC0.000168 CraveCoinCRAVE သို့ DarkKushDANK100.44 CraveCoinCRAVE သို့ GiveCoinGIVE677.97 CraveCoinCRAVE သို့ KoboCoinKOBO69.92 CraveCoinCRAVE သို့ DarkTokenDT0.296 CraveCoinCRAVE သို့ CETUS CoinCETI904.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:55:03 +0000.